Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » IMEX America: Ihe omume ilekwasị anya na ụlọ ọrụ ọhụrụ
Ndị na -ahazi nzukọ ọgbakọ nwere ohere ugbu a ijikọ na kerịta ahụmịhe n'oge IMEX America na Nọvemba a. A ga-eme emume abụọ pụrụ iche na ihe nkiri a na-eme na Nọvemba 9-11 na Las Vegas.
Ọhụrụ maka afọ a bụ Focus Focus, mepere ndị nhazi ụlọ ọrụ na ọkwa niile.
Ọ ga -eme na Smart Mọnde, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8, 2021.
Oge nnọkọ ga-eme ka mkparịta ụka miri emi banyere okwu na ihe ịma aka dị ugbu a dị ka njikwa otu, nhazi nzukọ, nkwukọrịta dị mma na ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, yana ahụike na ahụike.
Nzukọ Nzukọ Ndị Isi bụ nnọkọ ịkpọ oku naanị maka ndị isi ụlọ ọrụ dị elu sitere na ụlọ ọrụ Fortune 2000 yana-ọhụrụ maka afọ a-bụ Nlekọta ụlọ ọrụ, mepere ndị nhazi ụlọ ọrụ na ọkwa niile. Iwere ọnọdụ na Mọnde Mọnde, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8 ọgbakọ abụọ a ga-eme ka mkparịta ụka miri emi banyere nsogbu na ihe ịma aka dị ka njikwa otu, nhazi nzukọ, nkwukọrịta dị mma na ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, yana ahụike na ahụike.
Ọkachamara ụlọ ọrụ nzukọ na onye na -enyere aka nke ọma Terri Breining ga -edu ndị isi nzukọ nzukọ na Annette Gregg, onye isi oche onye isi ala, Ahụmịhe na MPI ga -eduga Focus ọhụrụ. A ga -ahazi usoro nke nnọkọ abụọ ahụ maka mmụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na -agba ndị bịara ya ume ịkekọrịta na ịgbanwere echiche na gburugburu nzuzo.
Carina Bauer, Onye isi oche nke IMEX Group, na -akọwa: “Ọ bụ ezie na ngalaba ihe omume azụmahịa bụ otu obodo niile, mkpa nke otu dị iche iche dị n'ime obodo a dị nnọọ iche na ndị na -ahazi ụlọ ọrụ abụghị otu.
“Anyị agbasawanyela onyinye anyị maka ndị na -eme atụmatụ ụlọ ọrụ n'afọ a site na mwepụta nke Ụlọọrụ Focus n'akụkụ Executive Meeting Forum. Oge abụọ a nwere mmekorita n'obi ha, na -enye ohere ịkekọrịta echiche na idozi nsogbu na ndị ọkachamara na ndị ọgbọ sitere na ụlọ ọrụ n'ofe ụwa niile. ”
The Inspiration Hub, ụlọ nke ụlọ akwụkwọ ebe a na -egosi ihe nkiri, na -aga n'ihu na mkparịta ụka onye na -eme atụmatụ ụlọ ọrụ n'oge ihe nkiri ahụ na nnọkọ mmụta: Mkparịta ụka ụlọ ọrụ: Mgbake nwere ebumnuche nke ụlọ ọrụ ihe omume. Bob Bejan, Onye isi oche ụlọ ọrụ, Ihe omume ụwa, Production Studios & Community Community, Microsoft na Nicola Kastner, VP, Global Head of Event Marketing Strategy na SAP ga -ekerịta ahụmịhe ha nke ịgagharị na ihe omume dijitalụ na nke anụ ahụ, mkpebi na ojiji nke nzukọ ngwakọ. , atụmanya na mkpa gbanwere nke ndị sonyere na ihe ọ pụtara maka imepụta mmemme.
Ndị na -azụta ụlọ ọrụ nwere pasent 22 nke ndị na -azụ ahịa 3,000 edebanyere aha ugbu a ịga IMEX America.
Nzukọ Nzukọ Ndị Isi bụ oku-naanị maka ndị isi ụlọ ọrụ dị elu sitere na ụlọ ọrụ Fortune 2000. Nlekọta ụlọ ọrụ ghe oghe maka ndị nhazi ụlọọrụ na ọkwa niile. Ha abụọ na -eme na IMEX America na Smart Monday nke MPI kwadoro, na 8 Nọvemba.
IMEX America na -eme 9 - 11 Nọvemba na Mandalay Bay na Las Vegas. Ịdebanye aha - n'efu - pịa Ebe a.
Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara nhọrọ ụlọ na akwụkwọ, pịa Ebe a.
eTurboNews bụ onye mgbasa ozi maka IMEX.